APGA BỤZỊ “MMM”-ỌHAKỊM – hoo!haa!!
APGA BỤZỊ “MMM”-ỌHAKỊM
Ichie Ikedi Ọhakịm, Gọvanọ chịburu Imo Steeti ekwuola na ” udiri mpụ na-aga n’ihu n’APGA ugbua egosiwo na site na mbido, APGA bụ ọnya ndi isi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ gbara dịka MMM iji gbunahụ ndi Igbo ibe ha ego ha tara ahụhụ kpata”
Ọhakịm boro ebubo a mgbe ọ na-enye nzaghachi maka asị onye ndu ndintorọbịa n’APGA nakwa Onyeisi oche otu ndọrọ ndọrọ ahụ bụ Viktọ Oye na-asịkwa ya.
“N’ezie, anyị achọghị ịtọ n’akụkọ ihe mere mgbe ochie mana Viktọ Oye na ndi otu ya kwesịrị ịma n’akụkọ na Ọhakịm tiri Fada ihe bụ asị nke anaghị ewuzi”
O kwukwara hoo!haa!! na APGA emeghị nhọpụta maka onye ga-eji aha otu ndọrọ ndọrọ ahụ zọọ ọkwa Gọvanọ n’Imo Steeti mana na okwu ahụ apụọla ụlọikpe.
“Ọ bụrụ na ya e mere ya bụ nhọpụta ime ụlọ, gịnị kpatara madụ iri n’anọ n’ime madụ iri n’ise pụtara ịzọ ọkwa ahụ ga-eji kpụpụ APGA ụlọikpe maka okwu ahụ. Madụ, ọ na-azọsa onwe ya ọkwa na nhọpụta?”
Ọ sịkwa na ọ bụ ihe ịtụnanya na o nweghị onye nwere isi nwetara ikike iji aha APGA zọọ ọkwa n’Anambra Steeti. Ọ jụrụ ihe kpatara enyeghi Ichie Ifeanyị Ụba nleghara anya ( waiver) iso zọọ ọkwa etu e siri nye Ifeanyị Ararume, onye nke batara APGA otu izu ụka tupu oge ekwesịrị ime ya bụ nhọpụta ime ụlọ.
“Keduzi maka nwunye onye ndu Ndigbo na-asọpụrụ bụ Ịyọm Bịanca Ojukwu? Kedu arụ ọ kpara mere ha jiri ga rapụta nwanyị nọrọ onwe ya, bịa wụọ ya n’ala ma ọ bụrụ na APGA abụghị MMM? Ha jiri ya hazie ọrụ, ka ọ dị la ihe a na-eme”
N’ịga n’ihu n’okwu ya, aka ahụ chịburu Imo Steeti kwuru si:”APGA, enwebughi ihe ruru Nde Naịra Ise tupu etinye ya bụ nhọpụta ime ụlọ, ugbua onyeisi ọche APGA nwezịrị ụgbọelu jet na- ebuzi sọọsọ ya efegharị”
“Akpachaghị anya, Obianọ ga-abụ Gọvanọ ikpeazụ APGA ga-enwe. N’afọ ọzọ, APGA ga-ama afọ n’ala, ma n’Anambra, ma n’Imo, ma n’ebe nile maka na ha ewerela atụmatụ Ndigbo mafuo”
Previous Post: EZE(King)/EZE (Teeth)/ỌNỤ (Mouth)
Next Post: Ike Ịjụ ụzọ na Dọkịta anya